အသုံးပွုနသေူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို လှဲမှားစှာအသုံးပွုနတေယျလို့ သံသယဝငျခံနရေတဲ့ Apple နဲ့ Google – SoShwe
Home/Tech/အသုံးပွုနသေူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို လှဲမှားစှာအသုံးပွုနတေယျလို့ သံသယဝငျခံနရေတဲ့ Apple နဲ့ Google
အသုံးပွုနသေူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို လှဲမှားစှာအသုံးပွုနတေယျလို့ သံသယဝငျခံနရေတဲ့ Apple နဲ့ Google
အမရေိကနျပွညျထောငျစု လှတျတျောအမတျတဈဦးဖွဈတဲ့ Richard Blumental က “Apple ကုမ်ပဏီနဲ့ Google ကုမ်ပဏီဟာ ရောဂါပိုးခွရောခံစနဈကို တီထှငျပွီးတဲ့နောကျ အဆိုပါစနဈကို အသုံးပွုသူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို လှဲမှားစှာအသုံးပွုနမှောကို စိုးရိမျနရေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Apple ကုမ်ပဏီနဲ့ Google ကုမ်ပဏီဟာ အဆိုပါရောဂါပိုးခွရောခံစနဈကို အသုံးပွုသူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို ဘယျလိုဘယျပုံထိနျးသိမျးထားပေးသလဲ ဆိုတာကို သိလိုပါတယျ။” လို့ ကွငွောပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Apple ကုမ်ပဏီနဲ့ Google ကုမ်ပဏီတို့ပူးပေါငျးပွီး COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစကျခံရသူတှေ သှားရောကျခဲ့တဲ့ နရောတှကေို အလှယျတကူခွရောခံနိုငျဖို့အတှကျ “TrackCOVID” လို့ အမညျရတဲ့ ရောဂါပိုးခွရောခံစနဈကို တီထှငျခဲ့ပါတယျ။ Covid-19 ရောဂါပိုးရှိနသေူတှအေနနေဲ့ အဆိုပါ App မှာ ရောဂါခံစားနရေသူဟာ ဘယျသူဘယျဝါဖွဈကွောငျး မဖျောပွဘဲနဲ့ သတငျးပေးပို့နိုငျပါတယျ။ အသုံးပွုသူတို့ရဲ့ တုံ့ပွနျမှုဇယားကို အခွခေံပွီး ဘယျသူဘယျဝါကတော့ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရနိုငျခွရှေိတယျဆိုတာမြိုး သတိပေးနမှောပဲဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
တဈဦးတဈယောကျက အခွားသူတှနေဲ့ တှဆေုံ့ဖို့အပွငျထှကျရတဲ့အခါ (သို့) လူစုလူဝေးရှိရာနရောကို သှားရောကျရတဲ့အခါမြိုးမှာ TrackCOVID App နဲ့ ခြိတျဆကျပွီး သှားရောကျခဲ့တဲ့နရောတှကေို မှတျတမျးတငျထားခဲ့မယျဆိုရငျ အကယျ၍မြားသာ အဲ့ဒီလူသှားခဲ့တဲ့နရောမှာ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရသူ ရှိလာတဲ့အခါမြိုးမှာ အခွားသောရောဂါ ကူးစကျခံရနိုငျခရြှေိသူတှကေိုပါ တနျးသိနိုငျအောငျ တီထှငျပွုလုပျထားခွငျးဖွဈတယျလို့ ကယျလီဖိုးနီးယားတက်ကသိုလျက သုတသေနပညာရှငျတှကေ မြှဝပွေောပွခဲ့ပါတယျ။
ရောဂါပိုးပြံ့နှံ့ခွငျးကို တတျနိုငျသမြှ လြော့ခနြိုငျဖို့အတှကျ အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးကတော့ လူထုတဈရပျလုံးကို ရောဂါပိုးရှိ/မရှိ စဈဆေးပေးခွငျးပဲ ဖွဈတယျလို့ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ အစိုးရအဖှဲ့ကို အကွံပွုထားတာမြိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ အမှနျတကယျမှာလညျး လူထုတဈရပျလုံးကို ရောဂါပိုးရှိ/မရှိ စဈဆေးပေးခွငျးဖွငျ့ ရောဂါပိုးပြံ့နှံ့ခွငျးကို ထိရောကျစှာ လြှော့ခနြိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု ကူးစကျရောဂါကုသကာကှယျရေးအဖှဲ့အစညျးက ဒါရိုကျတာဖွဈသူ ဒေါကျတာ Anthony Fauci က Google နဲ့ Apple ကုမ်ပဏီတို့ပူးပေါငျးပွီး တီထှငျထုတျလုပျထားတဲ့ ရောဂါပိုးခွရောခံစနဈဟာ ဖယျဒရယျအစိုးရအဖှဲ့အစညျးနဲ့ ပတျသကျခွငျးမရှိနဘေူးဆိုရငျ လူထုအနနေဲ့ ပိုပွီးစိတျခယြုံကွညျစှာ အသုံးပွုနိုငျမယျလို့ အခိုငျအမာယုံကွညျကွောငျး လူသုံးမြားတဲ့ လူမှုကှနျရကျတဈခုဖွဈတဲ့ Snapchat ကတဆငျ့ မြှဝပွေောပွခဲ့ပါတယျ။
Apple ကုမ်ပဏီ နဲ့ Google ကုမ်ပဏီက ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတှကေလညျး TrackCOVID App ကို အသုံးပွုသူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို အလှဲသုံးစားပွုလုပျခွငျးမရှိဘဲ လုံခွုံစှာထိနျးသိမျးထားပေးကွောငျးနဲ့ ရောဂါပိုးခွရောခံတဲ့စနဈကို ထညျ့သှငျးထားတဲ့ App တဈခုကိုတီထှငျပွုလုပျနိုငျခွငျးက ရောဂါကူးစကျနိုငျခရြှေိသူတှကေို သတိပေးနိုငျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးအဖွတေဈခုဖွဈတယျလို့ အသိပေးကွငွောခဲ့ပါတယျ။
အသုံးပြုနေသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေတယ်လို့ သံသယဝင်ခံနေရတဲ့ Apple နဲ့ Google
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Richard Blumental က “Apple ကုမ္ပဏီနဲ့ Google ကုမ္ပဏီဟာ ရောဂါပိုးခြေရာခံစနစ်ကို တီထွင်ပြီးတဲ့နောက် အဆိုပါစနစ်ကို အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေမှာကို စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Apple ကုမ္ပဏီနဲ့ Google ကုမ္ပဏီဟာ အဆိုပါရောဂါပိုးခြေရာခံစနစ်ကို အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းထားပေးသလဲ ဆိုတာကို သိလိုပါတယ်။” လို့ ကြေငြာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Apple ကုမ္ပဏီနဲ့ Google ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို အလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်ဖို့အတွက် “TrackCOVID” လို့ အမည်ရတဲ့ ရောဂါပိုးခြေရာခံစနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Covid-19 ရောဂါပိုးရှိနေသူတွေအနေနဲ့ အဆိုပါ App မှာ ရောဂါခံစားနေရသူဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း မဖော်ပြဘဲနဲ့ သတင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုဇယားကို အခြေခံပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါကတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာမျိုး သတိပေးနေမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်က အခြားသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အပြင်ထွက်ရတဲ့အခါ (သို့) လူစုလူဝေးရှိရာနေရာကို သွားရောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ TrackCOVID App နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သွားရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် အကယ်၍များသာ အဲ့ဒီလူသွားခဲ့တဲ့နေရာမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာ အခြားသောရောဂါ ကူးစက်ခံရနိုင်ချေရှိသူတွေကိုပါ တန်းသိနိုင်အောင် တီထွင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က သုတေသနပညာရှင်တွေက မျှဝေပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လူထုတစ်ရပ်လုံးကို ရောဂါပိုးရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက အစိုးရအဖွဲ့ကို အကြံပြုထားတာမျိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာလည်း လူထုတစ်ရပ်လုံးကို ရောဂါပိုးရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကူးစက်ရောဂါကုသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းက ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Anthony Fauci က Google နဲ့ Apple ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီး တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရောဂါပိုးခြေရာခံစနစ်ဟာ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်ခြင်းမရှိနေဘူးဆိုရင် လူထုအနေနဲ့ ပိုပြီးစိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်း လူသုံးများတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Snapchat ကတဆင့် မျှဝေပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Apple ကုမ္ပဏီ နဲ့ Google ကုမ္ပဏီက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကလည်း TrackCOVID App ကို အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားပေးကြောင်းနဲ့ ရောဂါပိုးခြေရာခံတဲ့စနစ်ကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ App တစ်ခုကိုတီထွင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းက ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေရှိသူတွေကို သတိပေးနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ အသိပေးကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
Previous ???????????????? ?????????????????????????? ???????????????
Next iPhone SE ဖုနျးအသဈကို ရောငျးခပြေးတော့မယျ့ APPLE